Tratry ny 4 Jolay! Afaka mandoa vola ny maha-Tia Tanindrazana amin'ny haino aman-jery sosialy | Martech Zone
Asabotsy Jolay 4, 2015 Asabotsy Jolay 4, 2015 Douglas Karr
Any Etazonia, mankalaza ny Fetin'ny Fahaleovantena isika anio… raha tsy izany dia fantatra amin'ny hoe 4 Jolay. Ny fitiavan-tanindrazana dia iray amin'ireo zavatra izay mety hisarika ny sain'ny maro sy hanangana fitoviana marika. Ny media sosialy, mazava ho azy, dia fantsona iray mety tsara hampidirana manokana ny mpihaino anao. Ampifanaraho izy roa dia manana fotoana tsara hanehoana ny fitiavan-tanindrazana ianao ary hahazo fizarana lehibe raha toa ka mampirehitra ny fihetsem-po amin'ny atiny ianao.
Manantena aho fa ho hitako ity infographic ity Unmetric iray volana lasa izay mba hanananao fotoana hiomanana, fa azonao atao ny manisy tsoratadidy ity pejy ity hiomanana amin'ny Jona ho avy! Unmetric dia manome dingana 5 hamoronana atiny fialantsasatra mahomby natao ho an'ny mpijery sosialy:
Alaharo ny enti-manana ary mamorona drafitra
Mahazoa aingam-panahy amin'ny alàlan'ny fandinihana ny atiny izay nahomby tamin'ny taon-dasa.
Drafitra sy Mamorona atiny voatsinjara ho an'ny fantsona sy salantsalany tsirairay.
Zarao ny atiny nohatsaraina isaky ny fantsona.
Tombano ho fanatsarana ary mamorona fanentanana tsara kokoa amin'ny taona ho avy!
Tags: drafitra fialantsasatraandron'ny fahaleovan-tenainfographic day andro fahaleovan-tenaJolay 4thtsy metrikasary tsy metrika
Ahoana no hahombiazan'ny marikao amin'ny varotra voaloboka